Parlemantera manohana ny fitondrana : Tsy maintsy ho ao anatin’ ny governemanta -
AccueilSongandinaParlemantera manohana ny fitondrana : Tsy maintsy ho ao anatin’ ny governemanta
Taorian’ ny firodorodoan’ ireo mpanohitra fitondrana nihaona tamin’ny praiminisitry ny marimaritra iraisana, dia niandry tantana ary nifampidinika tamin’i Ntsay Christian ihany koa ny avy amin’ ny parlemantera miisa 79 manohana ny fitondrana. Nivoitra kosa nandritra ny resaka nifanaovana ny tokony hanajana ny fisaraham-pahefana, ary mazava ho azy fa noresahina ihany koa ny mikasika ny fananganana ny governamanta izay nambaran’ ireo parlemantera fa rariny raha toa voasolo tena ao izy ireo. Naharitra oram-pamantaran’andro iray kosa ny fihaonana, ary taorian’ izany no nitafan’ireo parlemantera maro an’isa ireo tamin’ny mpanao gazety. Noho izany dia nambaran’ireo parlemantera miisa 79 sy senatera 58 fa rariny izy ireo raha voasolo tena anatin’ ny governemanta vaovao hitsangana eo, nambaran’ ny loholona Riana Andriamandavy mpitondra teny fa miisa 11 ny vondrona parlemantera ao amin’ ny antenimieram-pirenena, ary ny valo amin’ireo dia manohana ny Filoham-pirenena avokoa.
Noho izany dia nanambara mazava ireo parlemantera manohana ny fitondrana ireo fa izy ireo no maro an’isa, ary rariny sy hitsiny raha ho voasolo tena anatin’ ny governemanta. Tsy nanda izany fangatahan’ny parlemantera maro an’isa izany raha teo ny praiminisitra Ntsay Christian, ary nanamafy hatrany ny hoe “marimaritra iraisana”. “Notendrena ho praiminisitry ny marimaritra iraisana ao, ary governemanta ny marimaritra iraisana ihany koa no hitsangana eo” hoy hatrany Ntsay Christian. Mikasika kosa indray ny fisaram-pahefana dia mazava ny nambaran’ ireo eo anivon’ ny parlemantera maro an’isa fa tokony hajaina izany , satria ny fahefana mpanao lalàna dia tokony hipetraka eny amin’ny antenimieram-pirenena, ary ankilany ny fahefana mpanatanteraka no tokony ho eny amin’ ny lapan’ny tanàna. Raha fintinina moa izany io fanazavana sy resaka nifanaovan’ny parlemantera maro an’isa tamin’ny praiminisitra io, dia tokony hiverina ho eny Tsimbazaza amin’izay ireo parlemantera miara- miasa amin’ny kaomina Antananarivo renivohitra ireo.